Le migaqo nemiqathango ilandelayo ilawula konke ukusetyenziswa kwewebhusayithi ye-bikehike.org kunye nayo yonke imixholo, iinkonzo kunye neemveliso ezifumanekayo okanye ngewebhusayithi (ithathwe kunye, iWebhsayithi). IWebhusayithi iphethwe kwaye iqhutywa yibhayisekile (“ibhayisekile”). IWebhusayithi inikezelwa ngokuxhomekeke ekwamkelweni kwakho ngaphandle kokuguqulwa kwayo yonke imimiselo kunye neemeko eziqulethwe apha kunye nayo yonke eminye imithetho yokusebenza, imigaqo-nkqubo (kubandakanywa, ngaphandle kokunciphisa, uMgaqo-nkqubo waBucala we-bikehike) kunye neenkqubo ezinokuthi zipapashwe ngamaxesha ngamaxesha kule Site. ibhayisekile (ngokudibeneyo, "iSivumelwano").
Nceda ufunde esi siVumelwano ngononophelo ngaphambi kokuba ungene okanye usebenzise iWebhusayithi. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yewebhu sayithi, uyavuma ukuba ubotshelelwe yimigaqo nemiqathango yesi sivumelwano. Ukuba awuvumelani nayo yonke imimiselo kunye neemeko zesi sivumelwano, ngoko awukwazi ukufikelela kwiWebhusayithi okanye usebenzise naziphi na iinkonzo. Ukuba le migaqo nemiqathango ithathwa njengonikezelo ngebhayisekile, ukwamkelwa kukhawulelwe ngokucacileyo kule migaqo. IWebhusayithi ifumaneka kuphela kubantu abaneminyaka eli-13 ubudala.
Iakhawunti yakho ye-bikehike.org kunye neSayithi. Ukuba udala iblogi / indawo kwiWebhusayithi, unoxanduva lokugcina ukhuseleko lwe-akhawunti yakho kunye neblogi, kwaye unoxanduva olupheleleyo kuyo yonke imisebenzi eyenzekayo phantsi kwe-akhawunti kunye naziphi na ezinye izenzo ezithathwe ngokunxulumene neblogi. Akumele uchaze okanye unikeze amagama angundoqo kwibhlog yakho ngendlela elahlekisayo okanye engekho mthethweni, kubandakanywa ngendlela enenjongo yokurhweba ngegama okanye udumo lwabanye, kunye nokuhamba ngebhayisikili kunokutshintsha okanye kususe nayiphi na inkcazo okanye igama elingundoqo elithatha njengelingafanelekanga okanye alikho mthethweni, okanye kungenjalo kunokubangela uxanduva lokuhamba ngebhayisekile. Kuya kufuneka ngokukhawuleza uxelele i-bikehike malunga naluphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga kwebhlog yakho, iakhawunti yakho okanye naluphi na olunye ulwaphulo lokhuseleko. Ukuhamba ngebhayisekile akusayi kuba naxanduva lwazo naziphi na izenzo okanye okungenziwanga nguwe, kubandakanywa nawuphi na umonakalo walo naluphi na uhlobo owenziwe ngenxa yezo zenzo okanye utyeshelo.
Uxanduva lwaBafaki nxaxheba. Ukuba usebenzisa ibhlog, gqabaza ngebhlog, uthumele izinto kwiWebhusayithi, uthumele amakhonkco kwiWebhusayithi, okanye wenze (okanye uvumele nawuphi na umntu wesithathu ukuba enze) izinto ezifumanekayo ngeWebhusayithi (nasiphi na isixhobo esinjalo, “Umxholo” ), Unoxanduva ngokupheleleyo kumxholo, kunye nayo nayiphi na ingozi evela, ukuba Umxholo. Kunjalo nokuba uMxholo ekuthethwa ngawo ubandakanya umbhalo, imizobo, ifayile yeaudio, okanye isoftware yekhompyuter. Ngokwenza uMxholo ufumaneke, umela kwaye uqinisekisa ukuba: ukukhuphela, ukukhuphela kunye nokusetyenziswa koMxholo akuyi kuphula amalungelo obunikazi, kubandakanywa kodwa kungaphelelanga kwilungelo lokushicilela, ilungelo elilodwa lomenzi wechiza, uphawu lokuthengisa okanye amalungelo emfihlo yorhwebo, nawuphi na umntu wesithathu;
Ukuba umqeshi wakho unelungelo lempahla yengqondo oyilungulayo, unakho (i) ufumane imvume evela kumqeshi wakho ukuba uthumele okanye wenze i-Content Content, kubandakanywa kodwa engaphelelwanga kuyo nayiphi na isofthiwe, okanye (ii) ekhuselekile kumqeshi wakho ukuxhomekeka Onke amalungelo kuwo okanye kwi-Content;
Uthobele ngokupheleleyo naziphi na iilayisenisi zenkampani yesithathu ezichaphazelekayo, kwaye wenze zonke izinto eziyimfuneko ukugqithisa ngempumelelo ukuya kubasebenzisi bokugqibela nayiphi na imimiselo efunekayo;
I-Content ayiqukethe okanye ifake nayiphi na i-virus, iimbongolo, i-malware, amahashe eTrokra okanye enye into enobungozi okanye eyonakalisayo;
Isiqulatho asikho ugaxekile, asikho umshini-okanye uveliswe ngokungahleliweyo, kwaye ayiququzekanga into engekho mthethweni okanye engafunekiyo yoshishino eyenzelwe ukuqhuba i-traffic ukuya kumasayithi esithathu okanye ukukhulisa i-rankings injini yeesayithi, okanye ukuqhubela phambili izenzo ezingekho mthethweni (ezifana Njenge-phishing) okanye ukulahlekisa abamkeliyo malunga nomthombo wezinto (ezifana ne-spoofing);
Isiqulatho akusikho isohlwayo, asiququkisi okanye sivuselela ubundlobongela kubantu okanye kwiinkampani, kwaye ayikwaphuli ilungelo lokuzimela okanye ilungelo lomntu wonke umntu wesithathu;
Ibhulogi yakho ayifumanekanga ngezaziso ezingafunekiyo ezifana nezikhonkwane zogaxekile kwiinkcukacha zeendaba, uluhlu lwe-imeyile, ezinye iiblogi kunye newebhsayithi, kunye neendlela ezingafaniyo zokuphromotha;
ibhlog yakho ayichazwanga ngegama elahlekisa abafundi bakho ukuba bacinge ukuba ungomnye umntu okanye inkampani. Umzekelo, i-URL yebhlog yakho okanye igama ayilogama lomntu ngaphandle kwakho okanye inkampani engeyiyo eyakho; kwaye
unayo, kwimeko yoMxholo obandakanya ikhowudi yekhompyutheni, ihlelwe ngokuchanekileyo kunye / okanye ichaze uhlobo, uhlobo, ukusetyenziswa kunye nemiphumo yezinto eziphathekayo, nokuba kuceliwe ukuba wenze njalo ngebhayisikili okanye ngenye indlela.
Ngokungenisa uMxholo wokuhamba ngebhayisekile ukuze ubandakanywe kwiWebhusayithi yakho, unikezela ngebhayisekile kwihlabathi liphela, elisimahla, kunye nelayisenisi engeyiyo yodwa yokuvelisa, ukuguqula, ukulungelelanisa nokupapasha uMxholo kuphela ngenjongo yokubonisa, ukusasaza nokukhuthaza ibhlog yakho. . Ukuba ucima Umxholo, ukuhamba ngebhayisekile kuya kusebenzisa iinzame ezifanelekileyo zokuyisusa kwiWebhusayithi, kodwa uyavuma ukuba i-caching okanye ireferensi kuMxholo ayinakwenziwa ukuba ingafumaneki kwangoko.
Ngaphandle kokunciphisa naziphi na ezo zibonakaliso okanye iziqinisekiso, ukukhwela ibhayisekile kunelungelo (nangona ingelulo uxanduva) ukuba, ngokubona kwebhayisekile (i) ukwala okanye ukususa nawuphi na umxholo othi, ngokombono webhayisekile ofanelekileyo, waphule nawuphi na umgaqo-nkqubo wokuhamba ngebhayisekile okanye nangayiphi na indlela eyingozi. okanye echasayo, okanye (ii) aphelise okanye akhanyele ukufikelela nokusetyenziswa kweWebhusayithi kuye nawuphi na umntu okanye iziko nangasiphi na isizathu, ngokubona kwebhayisekile. Ukuhamba ngebhayisekile akuyi kuba nalunyanzeliso lokubonelela ngembuyekezo yayo nayiphi na imali ebihlawulwe ngaphambili.
Intlawulo kunye noHlaziyo. Imigaqo gabalala.
Ngokukhetha imveliso okanye inkonzo, uyavuma ukuhlawula ibhayisekile ngexesha elinye kunye/okanye inyanga nenyanga okanye umrhumo wonyaka wobhaliso obonisiwe (imimiselo yentlawulo eyongezelelweyo inokuqukwa kwezinye zonxibelelwano). Iintlawulo zomrhumo ziya kuhlawulwa ngesiseko sentlawulo yangaphambili ngomhla obhalisela uHlaziyo kwaye ziya kuhlawulela ukusetyenziswa kwaloo nkonzo ixesha lomrhumo wenyanga okanye wonyaka njengoko kubonisiwe. Iintlawulo azibuyiswa.
Ngaphandle kokuba wazisa ngebhayisekile phambi kokuphela kwexesha lobhaliso olusebenzayo ukuba ufuna ukurhoxisa umrhumo, umrhumo wakho uya kuhlaziya ngokuzenzekelayo kwaye uyasigunyazisa ukuba siqokelele umrhumo wonyaka okanye wenyanga wobhaliso olunjalo (kunye nazo naziphi na iirhafu) usebenzisa naliphi na ikhadi letyala okanye enye indlela yokuhlawula esinerekhodi yakho kuwe. Ukuphuculwa kunokurhoxiswa nangaliphi na ixesha ngokuthumela isicelo sakho sokuhamba ngebhayisekile ngokubhaliweyo.
Iinkonzo. Imirhumo; Intlawulo. Ngokubhalisela i-akhawunti yeeNkonzo uyavuma ukuhlawula ibhayisekile imirhumo yokuseta esebenzayo kunye nemirhumo eqhubekayo. Imirhumo esebenzayo iya kufakwa kwi-invoyisi ukususela kusuku lokumiselwa kweenkonzo zakho naphambi kokusebenzisa ezo nkonzo. Ukukhwela ibhayisekile kunelungelo lokutshintsha imiqathango yentlawulo kunye nemirhumo kwiintsuku ezingamashumi amathathu (30) phambi kwesaziso esibhaliweyo esiya kuwe. Iinkonzo zinokurhoxiswa nguwe nanini na kwiintsuku ezingamashumi amathathu (30) zesaziso esibhaliweyo sokuhamba ngebhayisekile.
Inkxaso. Ukuba inkonzo yakho ibandakanya ukufikelela kwinkxaso ye-imeyile ephambili. "Inkxaso ye-imeyile" ithetha ukukwazi ukwenza izicelo zoncedo lwenkxaso yobugcisa nge-imeyile nangaliphi na ixesha (ngemigudu efanelekileyo yokuhamba ngebhayisikili ukuphendula ngosuku olunye lomsebenzi) malunga nokusetyenziswa kweeNkonzo zeVIP. "Okuphambili" kuthetha ukuba inkxaso ithatha indawo yokuqala kunenkxaso kubasebenzisi beenkonzo ezisemgangathweni okanye zasimahla ze-bikehike.org. Yonke inkxaso iya kunikezelwa ngokuhambelana neenkqubo zeenkonzo ezisemgangathweni, iinkqubo kunye nemigaqo-nkqubo.
Uxanduva lweeNdwendwe zeWebhusayithi. i-bikehike ayizange ihlolisise, kwaye ayikwazi ukuphonononga, zonke izinto, kubandakanywa isofthiwe yekhompyutheni, efakwe kwiWebhusayithi, kwaye ayinakuba noxanduva lomxholo wezinto eziphathekayo, ukusetyenziswa okanye iziphumo. Ngokusebenzisa iWebhusayithi, ukuhamba ngebhayisekile akumelanga okanye kuthetha ukuba ixhasa izinto eziposwe apho, okanye ikholelwa ukuba loo nto ichanekile, iluncedo okanye ayinabungozi. Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kuyimfuneko ukuze uzikhusele kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye neminye imixholo eyingozi okanye eyonakalisayo. IWebhusayithi inokuqulatha umxholo okhubekisayo, ongafanelekanga, okanye ngenye indlela echaseneyo, kunye nomxholo oqulethe izinto ezingalunganga, iimpazamo zokuchwetheza, kunye nezinye iimpazamo. IWebhusayithi inokuthi iqulathe izinto eziphula ubumfihlo okanye amalungelo opapasho, okanye iphule ipropathi yomgangatho ophezulu wokuqonda kunye namanye amalungelo obunini, abantu besithathu, okanye ukukhuphela, ukukopa okanye ukusetyenziswa kwayo kuxhomekeke kwimigaqo nemiqathango eyongezelelweyo, echaziweyo okanye engachazwanga. Ukuhamba ngebhayisekile kukhupha uxanduva lwawo nawuphi na umonakalo obangelwa kukusetyenziswa ngabatyeleli beWebhusayithi, okanye nakuphi na ukukhuphela kwabo bandwendweli umxholo apho iposwe.
Umxholo oPoswe kwezinye iiWebhusayithi. Asizange sihlolisise, kwaye asikwazi ukuphonononga, zonke izinto, kubandakanywa isofthiwe yekhompyutheni, eyenziwe yafumaneka kwiiwebhusayithi kunye namaphepha ewebhu apho i-bikehike.org idibanisa, kunye nekhonkco kwi-bikehike.org. Ukuhamba ngebhayisekile ayinalo naluphi na ulawulo kwezo webhusayithi zingahambi ngebhayisekile kunye namaphepha ewebhu, kwaye ayinaxanduva ngemixholo yazo okanye ukusetyenziswa kwazo. Ngokunxulumanisa newebhusayithi engeyiyo eyokuhamba ngebhayisekile okanye iphepha lewebhu, ukukhwela ibhayisekile akumeli okanye kuthetha ukuba iyayivuma loo webhusayithi okanye iphepha lewebhu. Unoxanduva lokuthatha amanyathelo okhuseleko njengoko kuyimfuneko ukuze uzikhusele kunye neenkqubo zekhompyuter yakho kwiintsholongwane, iintshulube, amahashe eTrojan, kunye neminye imixholo eyingozi okanye eyonakalisayo. Ukuhamba ngebhayisekile kukhupha uxanduva lwawo nawuphi na umonakalo obangelwa kukusebenzisa kwakho iiwebhusayithi ezingezizo iibhayisekile kunye namaphepha ewebhu.
Ukwaphulwa kwelungelo lokushicilela kunye noMgaqo-nkqubo weDMCA. Njengoko ukukhwela ibhayisekile kucela abanye ukuba bahloniphe amalungelo abo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda, iyawahlonipha amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda wabanye. Ukuba uyakholelwa ukuba izinto ezibekwe okanye ezidityaniswe yi-bikehike.org zinyhasha ilungelo lakho lokushicilela, uyakhuthazwa ukuba wazise ukuhamba ngebhayisekile ngokuhambelana ne-Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) yePolisi. Ukuhamba ngebhayisekile kuya kuphendula kuzo zonke izaziso ezinjalo, kubandakanywa njengoko kufunwa okanye kufanelekile ngokususa izinto eziphulayo okanye ukukhubaza zonke iikhonkco kwizinto eziphula umthetho. Ukuhamba ngebhayisekile kuya kuphelisa ukufikelela kondwendwe kunye nokusetyenziswa kweWebhusayithi ukuba, phantsi kweemeko ezifanelekileyo, undwendwe luzimisele ukuba ngumphulaphuli ophindaphindiweyo we-copyrights okanye amanye amalungelo epropathi yobukrelekrele bebhayisekile okanye abanye. Kwimeko yokupheliswa okunjalo, ukukhwela ibhayisekile akuyi kuba nesibophelelo sokubonelela ngembuyekezo yayo nayiphi na imali ebihlawulwe ngaphambili kwibhayisekile.
I-intellectual property. Esi siVumelwano asidluliseli ukusuka kwibhayisekile ukuya kuwe nakuphi na ukukhwela ibhayisekile okanye ipropathi yomntu wesithathu, kwaye konke kulungile, isihloko kunye nomdla kwipropathi enjalo iya kuhlala (njengaphakathi kwamaqela) kunye nokuhamba ngebhayisekile kuphela. ibhayisekile, ibhayisekile.org, ilogo yebhayisekile, kunye nazo zonke ezinye iimpawu zorhwebo, iimpawu zenkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene nebikehike.org, okanye iWebhusayithi ziimpawu zorhwebo okanye iimpawu zorhwebo ezibhalisiweyo zebhayisekile okanye iilayisensi zebhayisekile. Ezinye iimpawu zorhwebo, iimpawu zenkonzo, imizobo kunye neelogo ezisetyenziswa ngokunxulumene neWebhusayithi inokuba ziimpawu zorhwebo zabanye abantu besithathu. Ukusebenzisa kwakho iWebhsayithi akukuniki lungelo okanye ilayisenisi yokuvelisa kwakhona okanye ukusebenzisa nakuphi na ukukhwela ibhayisekile okanye iimpawu zorhwebo zomntu wesithathu.
Iintengiso. Ukuhamba ngebhayisekile unelungelo lokubonisa iintengiso kwibhlog yakho ngaphandle kokuba uthenge i-akhawunti engenantengiso.
Unikezelo. Ukuhamba ngebhayisekile kunelungelo lokubonisa amakhonkco ophawu afana 'neBlog kwi-bikehike.org,' umbhali womxholo, kunye nokufakwa kwefonti kumbhalo osemazantsi webhlog okanye isixhobo sebar.
Iimveliso zeqabane. Ngokuvula imveliso yeqabane (umzekelo umxholo) kwelinye lamahlakani ethu, uyavumelana nemigaqo yenkonzo yelo qabane. Ungaphuma kwimimiselo yenkonzo yabo nangaliphi na ixesha ngokuvala imveliso yeqabane.
Amagama eDomain. Ukuba ubhalisa igama lesizinda, usebenzisa okanye udlulisa igama lesizinda elibhalisiweyo ngaphambili, uyavuma kwaye uyavuma ukuba ukusetyenziswa kwegama lesizinda kuxhomekeke kwimigaqo-nkqubo ye-Intanethi ye-Intanethi yaMagama aBekelweyo kunye namaNombolo ("ICANN"), kubandakanya Amalungelo oBhaliso kunye noXanduva.
Iinguqu. ukukhwela ibhayisekile inelungelo, ngokokubona kwayo, ukuguqula okanye ukubuyisela nayiphi na inxalenye yesi siVumelwano. Luxanduva lwakho ukusijonga esi siVumelwano ngamaxesha athile ukuze wenze utshintsho. Ukusebenzisa kwakho ukuqhubeka okanye ukufikelela kwiWebhusayithi kulandela ukuthunyelwa kwalo naluphi na utshintsho kwesi siVumelwano lubandakanya ulwamkelo lolo tshintsho. Ukuhamba ngebhayisekile kunokuthi, kwixesha elizayo, kunikeze iinkonzo ezintsha kunye/okanye iimpawu ngeWebhusayithi (kubandakanywa, ukukhutshwa kwezixhobo ezintsha kunye nezixhobo). Ezo mpawu zintsha kunye/okanye iinkonzo ziya kuxhomekeka kwimigaqo nemiqathango yesi siVumelwano.
Ukupheliswa. Ukuhamba ngebhayisekile kunokuphelisa ukufikelela kwakho kuyo yonke okanye nayiphi na indawo yeWebhusayithi nangaliphi na ixesha, okanye ngaphandle kwesizathu, okanye ngaphandle kwesaziso, ngokukhawuleza. Ukuba unqwenela ukusiphelisa esi siVumelwano okanye iakhawunti yakho ye-bikehike.org (ukuba unayo), unokuyeka nje ukusebenzisa iWebhusayithi. Ngaphandle koku kungasentla, ukuba une-akhawunti yeenkonzo ezihlawulwayo, loo akhawunti inokupheliswa kuphela ngokuhamba ngebhayisekile ukuba uthe waphula esi siVumelwano ngokubonakalayo kwaye uyasilela ukunyanga olo lwaphulo-mthetho phakathi kweentsuku ezingamashumi amathathu (30) ukusuka kwisaziso sokuhamba ngebhayisekile ukuya kuwe; ngaphandle kokuba, ukukhwela ibhayisekile kunokuphelisa iWebhusayithi ngokukhawuleza njengenxalenye yokuvalwa ngokubanzi kwenkonzo yethu. Zonke izibonelelo zesi siVumelwano ezithi ngokwendalo yazo zisinde ekuphelisweni kwazo ziya kusinda ekuphelisweni, kubandakanywa, ngaphandle komda, amalungiselelo obunini, izibambiso zewaranti, imbuyekezo kunye nemida yobutyala.
I-Disclaimer yeZiqinisekiso. IWebhusayithi inikezelwe "njengoko injalo". Ukuhamba ngebhayisekile kunye nababoneleli bayo kunye nabanini bamaphepha-mvume ke ngoko ababanga zonke iziqinisekiso zalo naluphi na uhlobo, ezicacileyo okanye ezichaziweyo, kubandakanywa, ngaphandle kwemida, iziqinisekiso zokurhweba, ukufaneleka kwenjongo ethile kunye nokungonakali. Akukho nokuhamba ngebhayisekile okanye ababoneleli bayo kunye nabanikezeli bamaphepha-mvume, yenza nasiphi na iwaranti yokuba iWebhusayithi ayinazimpazamo okanye ukufikelela kuyo kuya kuqhubeka okanye kungaphazamiseki. Uyaqonda ukuba ukhuphela ukusuka, okanye ufumane umxholo okanye iinkonzo nge, iWebhusayithi ngokubona kwakho kunye nomngcipheko.
Umda woButyala. Nakweyiphi na imeko iya kukhwela ibhayisekile, okanye ababoneleli bayo okanye abanikezeli bamaphepha-mvume, babe noxanduva ngokubhekiselele kuwo nawuphi na umcimbi wesi sivumelwano phantsi kwayo nayiphi na ikhontrakthi, ukungakhathali, uxanduva olungqongqo okanye enye ithiyori esemthethweni okanye enobulungisa: (i) nawuphi na umonakalo okhethekileyo, onokwenzeka okanye obangelwayo; (ii) iindleko zokuthengwa kweemveliso okanye iinkonzo ezibambeleyo; (iii) ngokuphazanyiswa kokusetyenziswa okanye ilahleko okanye urhwaphilizo lwedatha; okanye (iv) ngazo naziphi na iimali ezingaphezulu kweentlawulo ezihlawulwe nguwe ukuhamba ngebhayisekile phantsi kwesi sivumelwano ngexesha leenyanga ezilishumi elinesibini (12) phambi kwesizathu sokuthatha inyathelo. Ukuhamba ngebhayisekile akusayi kuba nabutyala kuko nakuphi na ukusilela okanye ukulibaziseka ngenxa yemicimbi engaphaya kolawulo lwabo olufanelekileyo. Oku kuchazwe ngasentla akuyi kusebenza kwinqanaba elithintelwe ngumthetho osebenzayo.
Ukumelwa ngokubanzi kunye neWaranti. Umele kwaye uqinisekisa ukuba (i) ukusebenzisa kwakho iWebhusayithi kuya kuhambelana ngokungqongqo kunye noMgaqo-nkqubo waBucala webhayisekile, kunye nesi siVumelwano kunye nayo yonke imithetho esebenzayo kunye nemimiselo (kubandakanywa ngaphandle kokunciphisa nayiphi na imithetho yendawo okanye imimiselo kwilizwe lakho, ilizwe, isixeko. , okanye enye indawo karhulumente, malunga nokuziphatha kwi-intanethi kunye nomxholo owamkelekileyo, kwaye kubandakanywa yonke imithetho esebenzayo malunga nokuhanjiswa kwedatha yobugcisa ethunyelwa ngaphandle isuka eUnited States okanye ilizwe ohlala kulo) kunye (ii) ukusebenzisa kwakho iWebhsayithi akuyi kwaphula okanye ukuxhaphaza amalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda walo naliphi na iqela lesithathu.
Ukukhululwa. Uyavuma ukuhlawula kwaye ubambe ukukhwela ibhayisekile engenabungozi, iikontraki zayo, kunye nabanini belayisensi, kunye nabalawuli babo, amagosa, abasebenzi kunye neearhente ezivela kwaye ngokuchasene nawo nawaphi na amabango kunye neendleko, kubandakanya nemirhumo yamagqwetha, evela kusetyenziso lwakho lweWebhusayithi, kuquka kodwa kungaphelelanga ekwaphuleni kwakho esi siVumelwano.
Iintlobo ngeentlobo. Esi siVumelwano sibandakanya isivumelwano sonke phakathi kokuhamba ngebhayisekile kunye nawe malunga nalo mba, kwaye banokulungiswa kuphela ngolungiso olubhaliweyo olusayinwe ngumlawuli ogunyazisiweyo we-bikehike, okanye ngokuthunyelwa ngebhayisekile yoguqulelo oluhlaziyiweyo. Ngaphandle kokuba umthetho osebenzayo, ukuba kukho na, ubonelela ngenye indlela, esi siVumelwano, naluphi na ufikelelo okanye ukusetyenziswa kweWebhusayithi kuya kulawulwa yimithetho yelizwe laseCalifornia, eU.SA, ngaphandle kokungqubana kwemigaqo yomthetho, kunye nendawo efanelekileyo naziphi na iimbambano ezivelayo okanye ezinxulumene nayo nayiphi na efanayo iya kuba yelizwe kunye neenkundla zomdibaniso ezibekwe eSan Francisco County, California. Ngaphandle kwamabango oncedo olugunyazisiweyo okanye olulinganayo okanye amabango amalunga namalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda (anokuthi aziswe kuyo nayiphi na inkundla efanelekileyo ngaphandle kokuthunyelwa kwebhondi), nayiphi na imbambano evela phantsi kwesi siVumelwano iya kusonjululwa ekugqibeleni ngokungqinelana neMithetho eBanzi yoLwabiwo oluBanzi Ulamlo lweNkundla kunye neNkonzo yokuLamla, Inc. (“JAMS”) ngabalamli abathathu abachongwe ngokuhambelana neMithetho enjalo. Ulamlo luya kwenzeka eSan Francisco, eCalifornia, ngolwimi lwesiNgesi kwaye isigqibo sokugweba sinokunyanzeliswa kuyo nayiphi na inkundla. Iqela elikhoyo kulo naliphi na inyathelo okanye inkqubo yokunyanzelisa esi siVumelwano liya kuba nelungelo kwiindleko kunye neentlawulo zamagqwetha. Ukuba nayiphi na inxalenye yesi siVumelwano ibanjwe ngokungekho mthethweni okanye ayinakunyanzeliswa, loo nxalenye iya kuthathwa njengebonisa injongo yamaqela, kwaye izahlulo eziseleyo ziya kuhlala zisebenza kwaye zisebenza. Ukurhoxiswa lilo naliphi na iqela naliphi na ixesha okanye imeko yesi siVumelwano okanye nakuphi na ukwaphulwa kwaso, nangawuphi na umzekelo, akuyi kurhoxisa ixesha okanye imeko okanye nakuphi na ukwaphulwa kwaso. Unganikezela ngamalungelo akho phantsi kwesi siVumelwano kulo naliphi na iqela elivumayo, nelivumayo ukubotshelelwa yimigaqo nemiqathango yalo; ibhayisekile inokwabela amalungelo ayo phantsi kwesi siVumelwano ngaphandle komqathango. Esi siVumelwano siya kuba sibophelela kwaye siya kukhokelela kwinzuzo yamaqela, abalandela emva kwawo kunye nezabelo ezivumelekileyo.